Warbixin : Wadashaqayn la’aan Sirdoon oo Sabab u ah Qaraxyadda Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Duqeymo ka dhacay Magaalada Saakow.
Axmed Madoobe oo sheegay sababta aysan u imaan kulankii uu ku baaqay madaxweyne…
Dalagga dalka oo bilihi danbe dibadda si aad ah loogu dhoofiyo.
Sirdoonka Soomaaliya iyo Dalalka caawiya ayaa u muuqda inaysan ka dhaxay wada shaqayn, si ay isaga kaashadaan ka hortagga weeraradda Argagixisanimo.
Xuseen Macalin-La Taliyihii hore ee Ammaanka Madaxwaynaha ayaa qaba inuusan jirin Istaraatiijiyad Amni oo heer qaran ah, wuxuuna u sababeeyay Kororka Falalka Amni Daradda iyo Weeraradda Alshabaab inay la xiriirto Siyaasad Xumadda Dalka.
Weeraradda Argagixisanimo ee Alshabaab ay ka gaysanayaan Somalia waxay sii kordhayaan xilli dhamaadka Sannadkan uu ku eg yahay Howlgalka Nabad Illaalinta Midowga Afrika, waxayna sidoo kale arrintan wal wal ku abuurtay Dalalka Gobalka sida Kenya iyo Uganda oo ay Kooxda Alshabaab awood u leedahay inay weeraro ka gaysato.
Sannadkii 2016 waxaa ka dhacay Somalia 395 Weerar ooa y ku dhinteen 723 Qof, 2010 36 Weerar oo dhacay waxaa ku dhintay 46 Qof, sida lagu sheegay Warbixin ay Sannadkan daabacday Kooxda Nairobi fadhigeedu yahay Sahan Research. Waxaana Sannadkan aan wali ku jirno uu ka laba jibaarnaa Tiradda Dhimashadda Sannadahii ka horeeyay, taasoo ka dhigan in Kooxda Alshabaab ay kordhisay Weeraradeeda.
Tartanka Mashaariicda ay maalgaliyaan Dalalka caawiya Soomaaliya, iyo iyadoo aysan jirin Xarun dhexe oo midaysa Macluumaadka Sirdoonka waxay dhaawac ku tahay dadaaladda la doonayo in lagu ogaado Qaraxyadda ay diyaarinayaan Alshabaab ka hor inta aysan fulin, sida ay qabaan Saraakiil Sirdoon oo Soomaali iyo Reer Galbeed ah.
Warqad uu Wasiirka Amniga Somalia u qoray Maraykanka, Ingiriiska, iyo Qaramadda Midoobay Bishii May oo ay aragtay HornAfrik waxa looga cabanayay Tartanka Muqaabaraad ee u dhaxeeya Dalalka Sirdoonka ka caawiya Somalia oo gaartay in la kala qarsado Macluumaadyo Muhiim ah oo suurtagalin karay in laga hortago Weeraro Halis ah.
“Jilayaasha kala duwan ee ku lugta leh Sirdoonka Somalia waxay la micno tahay in habka Shaqaddu uu yahay mid aan isku xirnayn, waxayna ku keenaysaa habacsanaan dadaalka ay Dowladdu ugu jirto la dagaalanka Argagixisadda, « ayaa lagu yiri warqadaasi.
Caqabadahan oo dhan waxay imaanayaan xilli ay ahayd inay Ciidanka Soomaaliya isku diyaariyaan in Ammaanka ay kala wareegaan 22,000 ee Nabad Illaaliyaal Midowga Afrika ah, kuwaasoo joogitaankooda Somalia uu ku eg yahay Dhamaadka Sannadkan, haddii aan la kordhin.
Dowladda Somalia waxay sidoo kale illaa iyo hadda ku guulaysan la’ dahay inay soo bandhigto Natiijadda Baarista Weerarkii Bariire, taasoo laftigeedu qayb ka ah wada shaqayn la’aanta Sirdoonadda Caalamiga ah iyo Sirdoonka Soomaaliya, Maadaama ay weerarkaasi wadajir u fuliyeen Ciidamo Soomali iyo Maraykan ah.